बजेट २०७७-७८ – Himalaya Television
बजेट बहस: सत्तापक्षकै सांसदहरुले उठाए गम्भीर पश्न, पोखियो असन्तुष्टी
१८ जेठ, २०७७ काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल शुरु भएको छ । सांसदहरुले यसमा आफ्ना विचार राखिरहेका छन । तर कतिपय सांसदले बजेटमाथिको छलफलको औचित्य छ र रु भनेर प्रश्न उठाएका छन । सत्तारुढ सांसदका नजरमा...
संघीय संसदमा बजेटमाथिको छलफल शुरु
१८ जेठ, २०७७, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ को बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल शुरु भएको छ । संसदका दुवै सदनमा छलफल शुरु भएको छ । बजेटमाथि बोल्दै विपक्षी सांसदहरुले कोरोनाका कारण उत्पन्न संकट सम्बोधन गर्ने गरी...
रासायनिक मलमा कर नलाग्ने भन्सार विभागको प्रष्टिकरण
१८ जेठ, २०७७, काठमाडौं । भन्सार विभागले कृषि प्रयोजनका लागि आयात भएको रासायनिक मलमा कर नलाग्ने प्रष्ट पारेको छ । सरकारी संस्थानबाट आयात हुने रासायनिक मलमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।...
निजी स्कूललाई सामुदायिकको जिम्मा दिने योजना कसले घुसायो बजेटमा ? बजेट सुन्दा शिक्षामन्त्री नै चकित !
१८ जेठ, २०७७, काठमाडौं । निजी स्कूललाई सरकारी स्कूलको गुणस्तर सुधारको जिम्मा दिने कुरा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को बजेटमा परेपछि धेरै चकित परे । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग समेत मेल नखाने यस्तो जुक्ति कसले फुरायो होला भनेर धेरैले शिक्षा मन्त्रालयको...